ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 53°N 27°E﻿ / ﻿53°N 27°E﻿ / 53; 27
ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ (တရားဝင်အခေါ်အားဖြင့် ဘီလာရုဇ်သမ္မတနိုင်ငံ) သည် အရှေ့ဥရောပတွင် ရှိသော ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှာ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ နှင့် လတ်ဗီယာနိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြသည်။ မြို့တော်မှာ မင့်စ် (Minsk) မြို့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံဧရိယာ ၂၀၇,၆၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သစ်တောများဖြစ်သည်။အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး တို့ဖြစ်သည်။
Республика Беларусь (ရုရှား)
အလံတော် National emblem
(အင်္ဂလိပ်: "State Anthem of Belarus")
ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (green)
ဥရောပတိုက်အတွင်း (dark grey) – [Legend]
အလက်ဇန္ဒား လူကာရှင်ကို (disputed)
၁၉၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်
၁၉၉၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်
၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်
၂၀၇,၅၉၅ km2 (၈၀,၁၅၃ sq mi) (အဆင့်: ၈၄)
၁.၄% (၂.၈၃၀ km2 or ၁.၀၉၃ sq mi)b
Failed to render property population: population property not found.
(အဆင့် - ၉၆)
• ၂၀၁၉ သန်းခေါင်စာရင်း
၄၅.၈/km2 (၁၁၈.၆/sq mi) (အဆင့် - ၁၄၂)
$၁၈၅.၈၈၉ billion (အဆင့် - ၆၉)
$၁၉,၇၅၈ (အဆင့် - ၆၆)
$၅၇.၇၀၈ billion (အဆင့် - ၇၅)
$၆,၁၃၃ (အဆင့် - ၈၄)
အလွန်မြင့် · ၅၃
ဘီလာရုဇ် ရူဘယ် (BYN)
^ တမ်းပလိတ်:Belarus Constitution
^ FAO's Information System on Water and Agriculture။ FAO။
၂၀ ရာစုနှစ်အထိ ဘယ်လာရုစ်သည် Principality of Polotsk၊ Grand Duchy of Lithuania၊ ရုရှားအင်ပါယာ နှင့် Polish–Lithuanian Commonwealth စသော အခြားသောတိုင်းပြည်များ၏ နယ်မြေဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုရှားတော်လှန်ရေး ပြီးနောက်တွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဝင် သမ္မတနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လက်ရှိနယ်မြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ၁၉၃၉ ပိုလန်ကို ရုရှားတို့ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဒုတိယပိုးလစ်ရှ်သမ္မတနိုင်ငံမှ နယ်မြေအချို့ပါ ထပ်မံရရှိပြီး ဘယ်လိုရုရှားဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။  ၎င်း၏နယ်မြေရောတိုင်းပြည်ပါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင် လုံးဝပျက်စီးခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး စီးပွားရေးရင်းမြစ် ထက်ဝက်ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။  စစ်ပြီးခေတ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ စစ်ဒဏ်ကို ခါးစည်းခံခဲ့ရသော ဘယ်လာရုစ်သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ မူလတည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲခြင်း (၁၉၈၅-၁၉၉၁) ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ ၁၉၉၀ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၇)ရက်တွင် ဘယ်လာရုစ်ပါလီမန်မှ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုကို ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၉၁၊ ဩဂုတ်လ (၂၅)ရက်တွင် လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့သည်။ အလက်ဇန္ဒားလူကာရှင်ကို (Alexander Lukashenko) သည် ၁၉၉၄မှစ၍ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်မှစ၍ ဘယ်လာရုစ်နှင့် ရုရှားတို့သည် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဘယ်လာရုစ်သည် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများဓနသဟာယအဖွဲ့ (Commonwealth of Independent States) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနက် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်း (Human Development Index) အမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဘယ်လာရုစ်လူဦးရေ၏ ၉.၄၉%ခန့်သည် မြို့ပြတွင်နေထိုင်ကြသည်။  ၈၀%ကျော်သည် ဒေသခံဘယ်လာရုစ်များ၊ ရုရှား၊ ပိုးလ် နှင့် ယူကရိန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၉၅ခုနှစ် ဆန္ဒခံယူပွဲမှစ၍ ဘယ်လာရုစ်တွင် တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကား (၂)မျိုး ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဘယ်လာရုစ်ဘာသာနှင့် ရုရှားဘာသာတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံတော်၏ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို အတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပေ။ ရုရှားအော်သိုဒေါက်ကျောင်းတော်ဂိုဏ်းမှာ အများစု ကိုးကွယ်ကြသောဘာသာဖြစ်သည်။ ဒုတိယအများဆုံးမှာ ရိုမန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းဝင်များဖြစ်သည်။
ဘီလာရုဇ် ဟူသောဝေါဟာရသည် ဘဲလ် (အဖြူ) နှင့် ရုစ် (ရုရှား) ဟူသော စကားလုံးများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားရာ "ရုရှားဖြူ" ဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အချို့သောဘာသာစကားများတွင် ဤနိုင်ငံကို "ရုရှားဖြူနိုင်ငံ" ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။
↑ Belarus leader Lukashenko holds secret inauguration amid continuing protests (23 September 2020)။
↑ Belarus: Mass protests after Lukashenko secretly sworn in။ BBC News (23 September 2020)။
↑ Lukashenko appoints new government (19 August 2020)။ 16 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ World Economic Outlook Database, October 2020။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ GINI index (World Bank estimate) – Belarus။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ United Nations Development Programme။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ 22 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Time Zone & Clock Changes in Minsk, Belarus။
↑ Icann Адобрыла Заяўку Беларусі На Дэлегаванне Дамена Першага Ўзроўню З Падтрымкай Алфавітаў Нацыянальных Моў.Бел။
↑ UN Statistics Division (2010-04-01)။ Standard Country and Area Codes Classifications (M49)။ United Nations Organization။ 2010-04-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Belarus: Window of Opportunity (see Table 15, page 66) (PDF)။ United Nations။
↑ Abdelal၊ Rawi (2001)။ National purpose in the world economy: post-Soviet states in comparative perspective။ Cornell University Press။ 2009-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Taylor & Francis Group (2004)။ Europa World Year, Book1။ Europa publications။ 2009-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Клоков В. Я. Великий освободительный поход Красной Армии. (Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии).-Воронеж, 1940.
↑ Минаев В. Западная Белоруссия и Западная Украина под гнетом панской Польши.—М., 1939.
↑ Трайнин И.Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии.—М., 1939.—80 с.
↑ Гісторыя Беларусі. Том пяты.—Мінск, 2006.—с. 449–474
↑ Axell၊ Albert (2002)။ Russia's Heroes, 1941–45။ Carroll & Graf Publishers။ p. 247။ ISBN 078671011X။ Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (အကူအညီ)
↑ About Belarus – Population။ United Nations Office in Belarus (2003)။ 17 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ&oldid=744330" မှ ရယူရန်
၂၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၆:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။